Mgbakọ mmekọrịta, dị ka Akụkọ Nta | Martech Zone
Mgbakọ mmekọrịta, dị ka Akụkọ Nta
Wenezde, August 16, 2006 Saturday, April 16, 2016 Douglas Karr
Nwa na teknụzụ na - agbanwe ngwa ngwa! Amaghị m na mmadụ ole n'ime gị chetara Tom Cruise na Akụkọ Nke Nta, ebe ọ na-atụgharị ozi site na ngosipụta ngosipụta. Nke a bụ preview na-egosi pụrụ iche utịp:
Afọ ole na ole gara aga, ọ bụ naanị mmetụta pụrụ iche. Nke a bụ vidiyo nke ọhụụ ọhụrụ nke teknụzụ yana nkọwa otu o si arụ ọrụ:
Nwere ike ịchọta ụfọdụ nnukwu ihe atụ na Eziokwu nke Eon website.
Tags: mmekọrịta mmekọrịtaobere akụkọonye ọrụ interface
Gwa ma ọ bụ Igosi gosipụtara
Ajụjụ 101… Ndị na-azụ ahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe ọchị na Starbucks